May All Forms of Discrimination Be Eliminated! – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Author lettwebawPosted on 8 March 2010 8 March 2010 Categories Reproduction, Thoughts
8 thoughts on “May All Forms of Discrimination Be Eliminated!”
9 March 2010 at 9:47 am
9 March 2010 at 9:55 am
“တစ်ယောက်တည်းကို ချစ်ဖူးပြီး အဲဒီ့တစ်ယောက်တည်းကိုပဲ တစ်သက်တာ လက်တွဲဖို့ စဉ်းစားတဲ့သူလောက် သည်လောကမှာ ဆင်ခြင်ဥာဏ် ကင်းမဲ့သူ ရှိမှာ မဟုတ်ဘူး”
ဆိုပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းပါးတစ်ခုထဲက ပြန်စာတစ်ခုမှာ ဆရာရေးခဲ့တာအတွက် (အကြိုက်တွေစရိုက်တွေ၊ ခံယူချက်တွေ၊ သက်ဝင်ယုံကြည်မှုတွေ၊ တွေးပုံ မြင်ပုံတွေမတူ အမြဲတစေ ကွဲလွဲနေတဲ့) ကိုယ်နဲ့မတူတဲ့ တစ်ဖက်သား(တွေ)ကို လက်လွတ်စပယ် ကဲ့ရဲ့ပိုမို စကားဆိုခြင်းလုို့ သမီးကပြောခဲ့တယ်ဆရာလက်ခံတယ်ပေါ့နော်။ 😀 no offence နော်ဆရာ။ ဒီစာလေးဖတ်ပြီး ကိုယ်လိုရာဆွဲပြောလိုက်ရတာ ၀မ်းသာတယ်။ 😀
ကျုပ်ကလည်း သည် comment ရေးသွားတဲ့အတွက် အလွန်ဝမ်းသာပါ၏။ “တစ်ယောက်တည်းကိုပဲ ချစ်ဖူးပြီး တစ်သက်တာ လက်တွဲဖို့ စဉ်းစားတဲ့သူ… ဘာညာ” ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ မကျေလည်တာကိုလည်း အလွန်ဝမ်းသာပါ၏။
လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးရက်လောက်ကပဲ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ဖုန်းဆက်ပါတယ်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ခုနစ်နှစ်က ကျုပ် အဲဒါမျိုး ရေးခဲ့တာကို သူ မကျေလည်ခဲ့ဘူး။ ခြေကန်ပြီး ညင်းခဲ့တယ်၊ သူ့ကိုယ်သူ အယုံကြီး ယုံခဲ့တယ်။ ကျုပ် ရေးတာ မှားတယ်၊ လွန်တယ်၊ တစ်ဖက်စောင်းနင်း ပြောတယ်လို့လည်း အားပါးတရ ချေပခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခု ခုနစ်နှစ်အကြာမှာ အဲသလို ပြောမိခဲ့တာ သူ မှားပါကြောင်း၊ ကျုပ်အဆိုတွေ သွေးထွက်အောင် မှန်လှပါကြောင်း ၀န်ခံရင်း လွန်ခဲ့တဲ့ ခုနစ်နှစ်က သူ့စကားများအတွက် တောင်းပန်သွားတာပါ။
မီးဆိုတာ ပူတယ်လို့ ပြောရင် မီးကို တစ်ခါမှ လက်နဲ့ မတို့ဖူးသေးသူ စကားတောင်မှ မတတ်ရှာသေးတဲ့ ကလေးပေါက်စနလေးက ဘယ်ယုံမှာတုံး။ စကားမတတ်သေးလို့သာ ပြန်မပြောနိုင်တာပါ။ သူ့ကလည်း လက်လွတ်စပယ် ကဲ့ရဲ့ပိုမို စကားဆိုတာလို့ပဲ သတ်မှတ်ချင်ပါလိမ့်မယ်။ မီးကို တကယ်ကိုင်ဖူးသွားတော့လည်း ကျုပ်ဆီ ဖုန်းဆက်လေသူ လေးဆယ်ကျော် အမျိုးသမီးလို ၀န်ခံတာတွေ ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ (အဲသလို ၀န်ခံအသိပေးသွားတဲ့ အမျိုးသမီးကိုလည်း အထူး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။)
အဓိကကတော့ level of being ပါ။ လိပ်ပြာလေးက ပန်းရောင်စုံလေးတွေ လှလိုက်တာလို့ ပြောရင် တီကောင်လေးက ဘယ်သဘောပေါက်မှာလဲလေ။ 😀 No offense နော် SMMS. ညည်းအတွက်လည်း အချိန်တစ်ခုက လိုဦးမှာပါ။ Time will definitely tell you and I hope you have no regrets then. 😦
10 March 2010 at 11:04 am
Well … I do hope that you will live until I prove you wrong.
One day, I do wanna say that “Sir, you were wrong … well at least for me.”
ဒါပေမယ့် တစ်ခုရှိတာက …. သမီးက တစ်ယောက်တည်းထက်ပိုချစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
so, I wasn’t defending for myself unlike the woman who called youafew days ago.
ဆရာပြောတာ အရမ်း subjective ဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောချင်တာ … မှားတယ်လို့ပြောချင်တာမှမဟုတ်တာ။
တစ်ယောက်တည်းကို (ဘယ်အချိန်လေးလောက်ပဲ သိပြီးမှ) လက်တွဲဖို့စဉ်းစားတာလဲ …. အချိန်ပေါ်မှာ … လေ့လာတဲ့နေရာမှာ .. ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုနေရာမှာ အရမ်းကွာနိုင်ပါတယ်။
တစ်ယောက်တည်းကို ၂ လလောက်ကြိုက်ပြီးယူတာနဲ့ …. ၂ နှစ်လောက်ကြိုက်ပြီး ယူတာနဲ့ …. ၁၀ နှစ်လောက်ကြိုက်ပြီးယူတာ ကွာတာပေါ့ဆရာ။
ငယ်ငယ်ကတည်းက အိမ်နီးချင်း၊ ၁၀ တန်းလောက်မှာ စ ကြိုက်ပြီး အသက် ၃၀ကျတော့ ယူတဲ့အတွဲတွေ (တစ်ယောက်တည်းကြိုက်ခဲ့တာမျိုးတွေကျတော့) ဆရာက စဉ်းစားဆင်ခြင်ဥာဏ်မဲ့တယ်လို့ ပြောဦးမှာပဲလား။ ရွေးခြယ်ခွင့်ရှိရဲ့သားနဲ့ မရွေးခြယ်တော့တာ သူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ပါ။ (same thing like some people choose to be gay while we choose to be straight) And do you still want to look down upon them, say that they are stupid, just because they chose not to have ‘options in life’.
ထားပါလေ … ဒီနေရာမှာ မငြင်းတော့ပါဘူး။ ဘီယာသောက်ရင်း ငြင်းခုန်ဖို့ မျှော်နေပါ့မယ်။
ဟုတ်ပါတယ် … No offence taken ပါ ဆရာ .. 😀
14 March 2010 at 10:12 am
You are confusing “choices” with “preferences.” Beingagay or straight is notamatter of choice, butapreference, somewhat like left or right handedness. In general, they don’t make choices but it’s what they prefer. In Burmese it’s သန်ရာ သန်ရာ။ I agree with “Options in life,” and yet some people, if not all, are too stupid to be aware that there are plenty of options in their lives. That’s what I have always been trying to emphasise. Hope to see you soon!
14 March 2010 at 9:52 am
Not related to your original article but to the comments. Myanmar people do not have the practise of “dating”. Most couple do not want to hang out with each other before declaring “I love you” (unless they are already close friends before). So, we need to become sweethearts (yee-sar) before hanging out together and learn about each other. Should we advocate the western practise of dating – so thataguy andagirl can spend some times together and check each other without requiring to be yee-sars? If you have time, I would like to request you to write an article on this. Thank you.
14 March 2010 at 10:04 am
A good point,of course, and thanks for the advice. I will try my best to discuss it some time in future.
26 August 2010 at 11:20 pm
Found the following2comments on this article on Weekly Eleven website:
0 #2 aungkyawswar 2010-03-18 14:20
Really appreciate this article and make me think wider in positive way.
Thank you very much to Atta Kyaw.
0 #1 messi 2010-03-17 07:50
very touching and realistic article…thanks writer Atta Kyaw for this superb article…
Previous Previous post: Where Shall We Keep Those Baskets?
Next Next post: Mandalay FM Broadcast 2